हाम्रो शरिर किन काम्छ ? के तपाईंलाइ थाहा छ र यस्लाइ रोक्न सकिन्छ त ? जन्नुहोस | Khabar Sadan खबर सदन
Home अर्थ हाम्रो शरिर किन काम्छ ? के तपाईंलाइ थाहा छ र यस्लाइ रोक्न...
हाम्रो शरिर किन काम्छ ? के तपाईंलाइ थाहा छ र यस्लाइ रोक्न सकिन्छ त ? जन्नुहोस
हामी किन काम्छौं? तपाईंको शरीर गर्मी, चिसो, तनाव, संक्रमण, र कुनै पनि सचेत सोच बिना अन्य सर्तहरूमा यसको प्रतिक्रियाहरू विनियमित गर्दछ। तपाई शरीरलाई चिसो गर्न पसिना आउँनुहुन्छ जब तपाई अत्यधिक तातो हुन्छन्, उदाहरणका लागि, तर तपाईले यसको बारेमा सोच्नु पर्दैनर जब तपाइँ चिसो हुन्छन्, तपाईं स्वचालित ढङग्ले हल्लनुहुन्छ। एक काम्नु तपाईको मांसपेशिहरु कस र द्रुत उत्तराधिकार मा आराम को कारण छ।
यो अनैच्छिक मांसपेशी आन्दोलन तपाईंको शरीरको चिसो र न्यानो हुन को लागी प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो। चिसो वातावरण को लागी प्रतिक्रिया, तथापि, तपाईं एक काँड कांच्ने मात्र एक कारण छ। बिमारी र अन्य कारणहरूले पनि तपाईंलाई हिलाउँन र काम्न सक्ने बनाउँदछ।
तपाइँको काँपिने र अन्य लक्षणहरूको लागि सही उपचार योजना उनीहरूको अन्तर्निहित कारणमा निर्भर गर्दछ।
Previous articleटाउको दुखेमा के गर्ने ? धेरै टाउको दुखयो भने अन्य खतर्नाक रोग पनि लेउछ त ? सतर्क हुनुहोस र थाहापाउनुहोस
Next articleअब सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाईंदै, कति बढाईंदै छ त भाडा ?